you nwere ike rụọ ọrụ ma ọ bụ nwee ma ọ bụ nwee ma ọ bụ nwee nnukwu nsogbu?
Ọrụ Felonies & Cannabis
You Chọrọ Industrylọ Ahịa Cannabis?
Ọ bụrụ na ejidere gị wee bụrụ onye felon n'oge machibidoro cannabis, mgbe ahụ edemede a bụ maka gị. Anyị na-ekpuchi usoro ọhụụ na mmepe nke iwu, mana na-elekwasị anya na Illinois n'ihi na ọ bụ steeti mbụ iji mebie iwu cannabis ma chọọ iwu atumatu mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'iwu iji mezie mmebi ndị a na-eleta ndị dị ka gị. Ọ bụghị mmebi iwu niile bụ otu, na iwu nke cannabis anaghị emeso ha ihe dịka. Ọ bụrụ na ị nwere ndekọ omempụ, iwu ndị ọzọ na-etinye ma e wezụga iwu cannabis iji chọpụta ma emezigharị gị ma nwee ike iru eru ijide akwụkwọ ikike cannabis.
Illinois nwere Nnabata nnabata Felon maka 98% maka ikikere
Departmentlọ ọrụ Illinois nke usoro ego na ọrụ ọkachamara wepụtara uche na-agbaka ọnụ ọgụgụ - 98% nke ndị chọrọ akwụkwọ ikike maka akwụkwọ ikike ajụ ajụla n'ihi na ha nwere mmebi iwu gara aga. Ọgba aka na Illinois na-anwa inyere ndị jerela oge ha aka ịbanye n'ọrụ.
Gụpụta Mgbasa Ozi banyere naanị 2% nke ndị anamachọ arịrịọ na-agọnarị n'ihi mmekpa iwu gara aga E HERE.
Ndi Nnukwu Egwu na-egbochi Asambodo Akwụkwọ ikike Cannabis gị
Ehee, a na m ahụ - achọta m site na iwe iwe ọka onye na-ahụ cannabis wee pịa ebe nrụọrụ weebụ m onye ọka iwu Cannabis. com ebe ị nwere ike ịchọta ụdị ozi ụlọ ọrụ cannabis niile bara uru - dị ka ajụjụ a dị ezigbo mkpa. Ndi otu mmadu nwere ike nweta ikike cannabis na ndi ozo. Nke a bụ ihe dị mgbagwoju anya ma sie ike - mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebanye aha na nọnyere m ruo ọgwụgwụ, mgbe ahụ ị ga-amata ọ bụghị naanị maka okwu a - kamakwa ihe nzuzo banyere ịdị adị ndụ na ihe niile.
Anyị ga-aza nke ahụ, mana dị ka vidiyo a iji nweta akụkọ banyere akụkọ mmebe iwu cannabis anyị na-agbasa kwa izu iji mee ka ị nọrọ n'elu ebe nkwado iwu cannabis bụ nke mba na steeti gị. Naanị denye aha ugbu a maka itinye aka na iwu iwu gọọmentị.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ajọ njọ ma ịchọrọ ịbanye n'ụlọ ọrụ cannabis, ị nwere ike? Ọ dabere na steeti gị, mana anyị ga-eleba anya na Illinois taa - nke maka okwu ikpe ziri ezi na-elekọta mmadụ dị ka inyere ndị ajọ mmụọ aka ị nwee ike ịlaghachi n'ụlọ ọrụ nwere ike imefu ha afọ ndụ ha, ezinụlọ ha na ụdị mpụ agha niile. Maka ịmachibido ya ifuru - nke ọma, ka anyị gwuo iwu ugbu a.
Nke mbu, ka anyị cheta na isi okwu nke iwu ahụ bụ idozi nsogbu nke agha ọgwụ ọjọọ, na nke ahụ n'uche iwu Illinois nyere na ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ n'okpuru nyocha nke ndabere site n'aka ndị uwe ojii steeti - ma ọ bụ na-enye ngalaba na-eme nyocha nyocha nke ndabere. nke a - anyị tụgharịa aka na Nkeji edemede 5 nke iwu Illinois
Edemede nke ise na-ekwu na ikike nke steeti ime ihe banyere ikikere nke azụmaahịa cannabis. Tivationme ka ihe ọkụkụ a pụta na-aga na Ngalaba Ọrụ Ugbo, ebe ndị na-ewepụta akwụkwọ na-ahụrịrị na Ngalaba Ego na Ọrụ Ndị Ọrụ.
Na nke ahụ na-ewetara anyị iwu ọhụrụ, Civil Admin Code nke Illinois maka ngalaba nke ụkpụrụ ọkachamara - nke ahụ ziri ezi, naanị mgbe ị chere na ọ dị mma cannabis, anyị nwetara ụkpụrụ iji chillax gị - kpọmkwem 3. Nkebi 2105-131, 2105- 135, na 2105-205.
Site na ngalaba atọ ndị a, ị ga-amụta na steeti Illinois nwere nkebi ahịrịokwu nke arụnyere n'ime ya - yabụ echela na ị nwere ike zụta ma kwe nkwa n'ụzọ gị n'ime ikikere ma ọ bụ egwuregwu n'usoro ahụ, mana na-enyekwa ohere maka ndị omekome. Ndabere iji kọwaa ihe kpatara ya - ma kọọ ihe kpatara ya na etu ha siri gbanwee ụzọ ha. Ka anyị buru ụzọ gaa na nke 3 - nke Illinois 'Civil Ad code:
N'ụzọ nkịtị, a ga-elele ntaramahụhụ maka mmebi iwu gị maka mmebi iwu gị. O zughị ezu igbochi gị kpam kpam na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ikpee gị, ha ga-elele oge ahụ kemgbe, ma ọ bụrụ na ọ bụ usoro nke mmebi iwu mbụ - yana ngụkọta 8 na --ebelata ihe - gụnyere afọ, mmecha nke ịga nke ọma. Ihe akaebe nke nhazigharị ihe na ihe ndị ọzọ na - emebi ihe.
Ya mere kọọ akụkọ banyere gị nke ọma banyere ihe mere i jiri bụrụ ezigbo nwa akwukwo n’agbanyeghi akụkọ ime mpụ gị - ọ bụghị mpụ niile ha nhata, enwere ọdịiche dị n'etiti mpụ ime ihe ike na mpụ ọgwụ. Gini mere iji di nma? Nke ahụ dị mkpa - ị maara ihe kpatara ya?
E nwere nkebi ụkpụrụ omume etinyere n’ime iwu cannabis na Illinois - nke ahụ bụ ihe Nkebi nke 135 bụ - mana o doro anya na ọ bụrụ na ị nwere ikpe nkwụmọtọ m gụrụ na peeji nke 22 nke iwu cannabis ọhụrụ - ọ bụrụ na ejideghị ya mgbe ahụ ụkpụrụ nke ụkpụrụ omume. Agaghị etinye aka, mana m na-agwa ndị ahịa m ka ha dị mma, naanị otu esi zụlite m ma kuziere m n'ụlọ akwụkwọ.
Yabụ gịnị ma ọ bụrụ na agọnarị gị akwụkwọ ikike n'ihi mpụ gị gara aga, akụkụ nke 205 na - arụ ọrụ - hụ na ha ga - ebipụta ma ọ bụrụ na ha mere ihe ọ bụla maka ịdọ aka ná ntị - dị ka ikwu n'okpuru ngalaba 6 ebe ọ na - ekwu na ọnụọgụ ndị arịrịọ maka onye omekome. nkwenye.
Yabụ enwere ya na ya. Nwere ike nweta akwụkwọ ikike ma ọ bụrụ na ị nwere onye omekome n'oge gara aga - mana ị ga - akọwa ihe kpatara nke a, yana otu i si bụrụ ezigbo mmadụ nke nwere ezigbo njikọ omume dị mma n'ihi ụgwọ ị kwụghachiri ọha mmadụ.
Na ekele maka ịrapagide anyị site na nyocha ahụ - ma cheta ịdenye aha iji nweta ọkwa nke akụkọ iwu cannabis kwa izu - ebe ị nwere ike nweta mmelite niile ziri ezi ruo mgbe ọ kwadoro iwu na mba niile. Hụ gị oge ọzọ.
Ọgwụgwọ Felons n'okpuru Iwu Cannabis na-agakarị na ngalaba edemede nke iwu.
na Nkeji edemede Illinois nke ise nke Iwu Apụrụ Cannabis
Ngalaba Ag Scores Craft Grows
Iwu Ngalaba nke Ego na Ọkacha Ahụ Ndị Nlekọ Anya Cannabis.
Kedu ka ajọ m si emetụta ikike m cannabis?
Ihe ojoo gi nwere ike imetụta mkpọsa ikike cannabis gị n'ihi na ndị steeti chọrọ ijide n'aka na ọ nweghị mkpụrụ cannabis na-efu, ma ọ bụ ego ya. Illinois nwere ngalaba ole na ole na-emetụta ma ọ bụrụ na ị nwere ajọ njọ - mana ọ naghị achọpụta gị ozugbo.
nkwenye ikpe gara aga
Ngwa Cannabis na Mkpesa Mpụ
tụlee ịtụle ihe
Ekwesịrị 'ịtụle ihe' maka nrụzigharị
Ihe ụfọdụ akọwapụtara iji hụ etu esi ekpe ikpe ajọ omume gị gara aga
nmebi iwu nke mmebi iwu
5 afọ kemgbe
akwụkwọ ikike gara aga
afọ nke oge nkwenye
ikpe zuru oke nke ahịrịokwu
ihe akaebe nke agwa dị ugbu a
ihe akaebe nke ndozigharị
ihe ndị ọzọ na - egbochi ihe
Ekwupụtara Iwu Omume Fekpụrụ omume na ikike Cannabis
Yiri ka ọ ga-etinye n'ọrụ ma ọ bụrụ na ikpe gị ikpe - yabụ enweghị omume ọma achọrọ na ndabere dị ọcha ??
na-emetụta ahụike ọha
chọrọ ezigbo omume ọma na ikikere
chọrọ ntụkwasị obi na ọha na eze
Mkpesa nke Mkpesa bụ Onye A machibidoro Cannabis Felons na Illinois
Lee nkebi nke 6 maka akwụkwọ achọrọ maka mbipụta ọ bụrụ na ị nwere ikike iju gị na ikpe mpụ gị.